शब्दकोश: नेपालथोक एक्सप्रेस : बन्द, बाइक र माछा
आफू कहिल्यै नआएको ठाउँ । यो बाटो भक्तपुरभन्दा नकाटेको । यसैले हरेक मोड नयाँ लाग्यो । धुलिखेल झरेपछिको सल्लाघारी । बन्दको प्रभाव होला, धुलिखेलपछि त बाटो पूरै सफा देखियो । फाट्टफुट्ट गाडी र हाम्रै जस्तो बत्तिएको मोटरसाइकल । कमल कुमारजीको स्टाइल पनि गजब लाग्यो । कहिले निकै पुछारमा छुटेर मोडबाट लामो समय अन्तर्ध्यान हुने, कहिले भने निकै सुरिएर अग्रमोर्चामा देखिने । गाडीको चाप त के, चालचुल समेत नभएकाले बाइकलाई सडकमा मनमौजी गर्न छुट थियो । तर हामी सम्हालिने किसिमका युवक थियौं । भकुण्डेबेंसीको सहरोन्मुख मुहार पनि रमाइलो । त्यहीं खाजा खाइयो । हाइजिनिक हुन्छ भन्दै चना र आलुको मेनुमा सबैको मन भुलाए कमलजीले । नत्र चाउमिन र चाउचाउ जस्ता ‘राष्ट्रिय परिकार’ नपाइने नेपालको कुन ठाउँ छ र ?
लहलह धानखेत, गाउँको यादले भक्कानो भरियो
सडक छेउछाउ हरियालीको लहराले नेपालथोक पुग्दासम्म बेरिरह्‌यो । बरु धुलिखेल कटेपछि गर्मीले फुलौरा उठाउन थाले पसिनाको । बाटोमा फोटो निकै खिचियो । धेरैजसो फोटो त बाइक गुड्दागुड्दै खिचियो । चालकको पछाडि आरामले बस्नुको फाइदा थियो यो ।
फोटो त खिचियो, नाम थाहा भएन ! के जाति कीरो रे यो ?
मोडपछि मोड आउँछ तर खोइ त नेपालथोक ? बाइकमा बस्दा-बस्दा पट्यार लागिसक्यो । दुखाइ त्यस्तै ! यति टाढा रहेछ भन्ने अन्दाज नै थिएन । साढे १० बजे हिँडेका मनुवा, आराम गर्दै गुड्दै आउँदा बल्ल साढे १ बजे गन्तव्य पुगियो । जुन हिसाबले नेपालथोक जाने भन्ने योजना बुन्दा यो ठाउँ विशिष्ट होला भन्ने चित्र बनेको थियो दिमागमा, त्यस्तो केही रहेनछ । यो नेपालथोक हो है भनेर आफैंलाई बारम्बार सम्झाउनुपर्ने देखिन्थ्यो । यसैले रुपेशजीले बाइक एक कुनामा लगेर रोकिसक्दा पनि गन्तव्य आएकोबारे होशै भएन ।
टहरा जस्ता १०-१५ वटा घर छन् । सबै पसलै जस्ता देखिन्थे । चम्किलो किलिप सिउरिएकी युवती उभिए जस्तै सबैजसो घर सोलारजडित थिए । एउटा पसलमा छिरियो । नेपालथोकको विशेषता यहाँको माछा रे । यति टाढा आएपछि माछा नखाई फर्किने कुरै थिएन । अर्डर गरियो, खरिएर राता भएका माछा प्लेटमा गुजुल्टिएर आए । साथमा बियरको चुस्की पनि लिने भइयो । निकै अन्तरालमा साथीहरूको जमघटमा मैले पनि गिलास भरेँ । सोलार बत्तीले फ्रिज नधान्ने भएकाले हपहपी भएर गुम्सिएको रहेछ बियर । तर ठीक्क चिसो भन्न मिल्ने ! तीतो झोलमा पौडी खेल्दै पेटतिर छलाङ मार्न थाले माछाहरू । संगत गुनाको फल भनेर आफूले चुस्की लिएको दोष साथीहरूको टाउकोमा थोपर्ने कुरो पनि भएन । तर जमघटले हामी मान्छेलाई धेरै कुरामा बगाउँछ । कहीं समथर नदी, कहीं उथलपुथल खहरे ! म त नेपालथोकमा समथर नदीमै थिएँ । फेरि यस्तो रसिक दिन नआउन सक्छ । लहडमै घुमघाममा हिंडिने, हप्प गर्मी पाकेको ठाउँमा मछली टोक्ने । कमलजीले आउँदा-आउँदै बाटोमा रचेको भन्दै एउटा गीत सुनाए । बल्ल रहस्य खुल्यो कमलजी बेलाबेला मोडमा सुस्ताउनुको, बूढा गीति गेंडा फुराउँदै हिंड्दा रहेछन् ।
सपना टुटेर के भो
म फेरि पनि निदाइदिन्छु
म दोबाटोमा छुटेर के भो
म अर्कै गोरेटो भेटाइदिन्छु
मलाई छैन चाहत
त्यो झूटो राहतको
यो मन फाटेर के भो
मनै त हो फेरि सिलाइदिन्छु
दर्पण फुटेर के भो ?
म शुन्य हुँ शुन्यमै बिलाइदिन्छु
म फेरि पनि निदाइदिन्छु ।
बाटो बन्द ! खुर्कोट-सिन्धुली सडक निर्माण योजनाका कारण बाइक समेत चल्न नमिल्ने गरी नेपालथोकदेखि बाटो बन्द गरिएको छ । नेपालथोकबाटै रोशी खोलाको छेउबाट सिन्धुली जाने गाडी नै चल्ने कच्ची बाटो रहेछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 03, 2011
Overlap from Pawan September 02, 2011
Nepalthok ra bike ko chain kura aayo...machha khoi ta sir ? ki marna baaki chha ? he he he he he he
Roopess September 02, 2011
यसपछिको कथा लेख्ने जिम्मा कमलकुमारलाई छोडेको हुनुपर्छ कविज्युले!
Jotare Dhaiba September 02, 2011
Accidently apuro publish bhayera barbad ! अब पूरा पोस्ट राखेको छु ।
.... September 03, 2011
Kira ko naam "Lady Bird "
Jotare Dhaiba September 03, 2011
Thanksalot '....'
दीपक जडित September 03, 2011
रमाईलो यात्राको कुरा रहेछ । नेपालथोक भन्ने ठाउँ नै थाहा थिएन मलाई त । अनि त्यो लेडि बर्डको नेपाली नाम चैं 'टिकटिके' राख्या थ्यौं हामीले त; सानोमा संकलन गर्दै स-सानो सिसीमा हाल्थ्यौं । कति सास्ती हुन्थ्यो होला तिन्लाई ।
प्रकाश समीर September 03, 2011
तपाईंको पोष्टका बिशेषता भनेको साह्रै मनमोहक तस्विरहरु नै हो धाइबा जी । यात्रा बर्णन पनि साह्रै मज्जाको लाग्यो।
Aakar September 03, 2011
२ वर्ष अघि को यात्रा को याद आयो । बसको छत झनै रमाइलो हुन्छ । :)
Dilip Acharya September 04, 2011
यो बाटो म पनि हिँडेको छैन...एक पटक 'जाने' जोग मिलेर पनि त्यत्तिकै भा'थ्यो। जेहोस.. यसपाला 'वेब-भ्रमण' भयो !। एकचोटी मौका मिलाएर जाँदा रमाइलै हुनेछ भन्ने हम्लाइ पनि लाग्यो :)
Kedar Shrestha'Gagan' September 05, 2011
Aafaile Ma6a Khaya Jhai Bhayo Hai . Aba Ghara Jada Tyahi Bato Bhayara Janu Parla.
Ashesh September 05, 2011
मजा आयो पढ्नलाई दाई!!!
नयां लाउरे (Naya Laure) September 05, 2011
धुलिखेल बाट भकुन्डेबेशी सम्म त म पनि गा'छु हो यो बाटोमा आधा दशक अघि। यस्ता बाटोलाई सिनिक हाइ वे भनेर बखान गर्छ अम्रिका तिर। नेपालमा यस्ता बाटो कति कति!!
Kay Kay September 07, 2011
बाटोमा मैले गुथेको गीत राख्न मन लाग्यो :
न, भाग तिमी
न, खोज मलाई
दर्पण फुटेर के भो?
म फेरि पनि निदाइदिन्छु ।।
www.lekhak blogsport.co.np October 08, 2011
भरियो आँखा मेरो
छछल्कियो मन मेरो
धुलिखेल्को हरियाली देखेर ।।